Uyenza njani iNkunkuma?
Umgquba wenkunkuma iyimfuneko kwaye ayinakuphepheka xa amakhaya esenza esakho isichumiso ekhaya. Inkunkuma yokufaka umgquba ikwayindlela efanelekileyo neyoqoqosho kulawulo lwenkunkuma yemfuyo. Kukho iindidi ezimbini zeendlela zokugalela umgquba ezifumanekayo kwinkqubo yokwenza isichumiso esizenzekelayo.
Ukwenza umgquba ngokubanzi
Ubushushu bomgquba ngokubanzi bungaphantsi ko 50 ℃, unexesha elide lomgquba, ngesiqhelo iinyanga eziyi 3-5.
Zintathu iintlobo zokufumba: uhlobo olucwangcisiweyo, uhlobo lwembombo, kunye nohlobo lomhadi.
Uhlobo lweFlat: zilungele indawo ezinobushushu obuphezulu, imvula eninzi, ukufuma okuphezulu, kunye nenqanaba eliphezulu lamanzi aphantsi komhlaba. Ukukhetha umhlaba owomileyo, ovulekileyo kufutshane nomthombo wamanzi kunye nokulungele ukuthutha. Ububanzi besitaki yi-2m, ukuphakama kube yi-1.5-2m, ubude bulawula ubungakanani bempahla eluhlaza. Ukuhlengahlengisa umhlaba ngaphambi kokufumba kunye nokugquma umaleko ngamnye wezinto ngezinto ezinengca yengca okanye ii-turfs zokufunxa incindi ebusiweyo. Ubunzima bomaleko ngamnye yi-15-24cm. Ukongeza isixa esifanelekileyo samanzi, ikalika, udaka, umhlaba ebusuku njl.njl phakathi komaleko ngamnye ukunciphisa ukonyuka kolophu kunye ne-ammonia volatilization. Ukuqhuba ukujika komgquba oziqhubela ngokwakho (omnye womatshini obaluleke kakhulu womgquba) ukuguqula isitaki emva kokufakwa kwenyanga enye, njalo njalo, de kube ekugqibeleni izinto zibolile. Ukongeza isixa esifanelekileyo samanzi ngokungqinelana nobumanzi okanye ukoma komhlaba. Izinga lomgquba liyahluka ngokwamaxesha onyaka, ngesiqhelo iinyanga ezi-2 ehlotyeni, iinyanga ezi-3-4 ebusika.
Uhlobo lweSemi-pit: ihlala isetyenziswa ekuqaleni kwentwasahlobo nasebusika. Ukukhetha indawo enelanga kunye ne-lee yokumba umgodi ngobunzulu beenyawo ezingama-2-3, i-5-6 yeenyawo ububanzi, kunye ne-8-12 yeenyawo ubude. Emazantsi kunye nodonga lomhadi, kufuneka kubekho iipaseji zomoya ezakhiwe ngendlela yomnqamlezo. Umphezulu womgquba kufuneka uvalwe kakuhle nomhlaba emva kokudibanisa iikati ezili-1000 ezomileyo. Amaqondo obushushu aya kunyuka emva kokufaka umgquba kwiveki enye. Sebenzisa uhlobo lwe-groove ye-compost tuner ukujika imfumba yokuvunda ngokulinganayo emva kokuhla kweqondo lobushushu kangangeentsuku ezingama-5-7, emva koko ugcine ukubekwa kuze kube ekugqibeleni izinto ezingavuthiweyo zibolile.
Uhlobo lomngxuma: 2m ubunzulu. Ikwabizwa ngokuba luhlobo lwangaphantsi komhlaba. Indlela ye-Stack iyafana nohlobo lomjelo ophakathi. Ngexesha le inkqubo yokubola, i-helix ephindwe kabini yomgquba isetyenziselwa ukuguqula izinto zonxibelelwano olungcono nomoya.
Ukwenza umgquba ngeThermophilic
I-Thermophilic composting yeyona ndlela iphambili yokuphatha ngobunyulu izinto eziphilayo, ngakumbi inkunkuma yabantu. Izinto ezinobungozi, ezinjengentsholongwane, amaqanda, iimbewu zengca, njl. Kumququ nakukhutshwa, ziya kutshatyalaliswa emva konyango olushushu kakhulu. Kukho iindidi ezi-2 zeendlela zokugalela umgquba, uhlobo olucaba kunye nohlobo lomngxuma ongaphakathi. Itekhnoloji ziyafana ngomgquba ngokubanzi. Nangona kunjalo, ukukhawulezisa ukubola kweendiza, umgquba we-thermophilic kufuneka ugalele i-cellulose ephezulu yokubola kweentsholongwane, kunye nokuseka izixhobo zomoya. Amanyathelo okubonisa ukubanda kufuneka enziwe kwiindawo ezibandayo. Ubushushu obuphezulu bomgquba budlula ngokwamanqanaba aliqela: Ubushushu-Ubushushu obuphezulu-Ubushushu behlisa-ukubola. Kwinqanaba lobushushu eliphezulu, izinto ezinobungozi ziya kutshatyalaliswa.
RIzinto zokwenza isichumiso se-Organic esenziwe ekhaya
Sicebisa abathengi bethu ukuba bakhethe ezi ntlobo zilandelayo ukuba zizinto zakho ezingafunekiyo zesichumisi esenziwe ekhaya.
1. Tyala izixhobo zokwenza imveliso
1.1 Amagqabi awileyo
Kwizixeko ezininzi ezikhulu, oorhulumente bahlawula imali yabasebenzi yokuqokelela amagqabi awileyo. Emva kokuba umgquba uvuthiwe, uya kunika okanye uthengise kumhlali ngexabiso eliphantsi. Kungangcono emhlabeni ngaphezulu kwe-40 cm ngaphandle kokuba kukwitropiki. Imfumba yahlulwe yangamacandelo aliqela atshintshanayo amagqabi kunye nomhlaba ukusuka emhlabeni ukuya phezulu. Uluhlu ngalunye amagqabi awileyo angcono ngaphantsi kwe-5-10 cm. Ukugquma phakathi kwamagqabi awileyo kunye nomhlaba kufuna iinyanga ezi-6 ukuya kwezi-12 ukubola. Gcina ukufuma komhlaba, kodwa ungagaleli amanzi kakhulu ukuthintela ukulahleka kwezakhamzimba zomhlaba. Kungangcono ukuba unesamente ekhethekileyo okanye iphuli yomgquba.
Izinto eziphambili: initrogen
Amacandelo Sekondari: i-phosphorus, i-potassium, isinyithi
Isetyenziselwa isichumiso se-nitrogen, uxinzelelo olusezantsi kwaye ayisiyongozi kwaphela kwingcambu. Akufuneki isebenzise okuninzi kwinqanaba lokudubula kweziqhamo. Ngenxa yokuba iintyatyambo kunye neziqhamo zifuna ubuninzi be-phosphorus potassium sulphur.
Ukuba usebenzisa iziqhamo ezibolileyo, imbewu, idyasi yembewu, iintyatyambo kunye nokunye, ixesha elibolileyo linokufuna ixesha elide. Kodwa umxholo we-phosphorus, i-potassium nesalfure ziphezulu kakhulu.
1.3 ikeyiki yeembotyi, izitya zembotyi njl.
Ngokwemeko yokuchithwa, umgquba okhulileyo udinga ubuncinci iinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6. Kwaye eyona ndlela ikhawulezayo yokuvuthwa kukufaka intsholongwane. Umgangatho womgquba awunamphunga kwaphela.
Umxholo we-phosphorus potassium sulphur uphezulu kunomgquba wenkunkuma, kodwa ungaphantsi kwesiqhamo somgquba. Sebenzisa iimbotyi zesoya okanye zeembotyi ukwenza umgquba ngqo. Ngenxa yokuba umxholo weembotyi zesoya uphezulu, ke, ixesha lokubuyisa lizolile ixesha elide. Kumntu othanda njengesiqhelo, ukuba azikho iintyatyambo ezifanelekileyo, isenalo ivumba elibi emva konyaka okanye iminyaka eliqela kamva. Ke ngoko, sicebisa ukuba, ziphekwe kakuhle iisoyi zesoya, zitshiswe, emva koko ziphinde zibuyiswe. Ke, inokunciphisa kakhulu ixesha lokubuyisa.
2. Ilindle lezilwanyana
Inkunkuma yezilwanyana ezitya utyani, ezinje ngeegusha neenkomo, zilungele ukuba zibile zivelise izichumiso zebio. Ngaphandle koko, ngenxa yomxholo ophezulu we-phosphorus, umgquba we-hen kunye nobulongwe behobe nakho kufanelekile.
Qaphela: Ukuba ilawulwa kwaye iphinde isetyenziswe kwakhona kumzi-mveliso oqhelekileyo, ilindle lomntu linokusetyenziswa njengezinto ezingafunekiyo ze isichumiso sezinto eziphilayo. Amakhaya, nangona kunjalo, ukunqongophala kwezixhobo zokuqhubekeka phambili, ngenxa yoko asikhuthazi ukuba sikhethe ilindle lomntu njengezinto ezingafunekiyo xa usenza isichumiso sakho.
3. Isichumisi sendalo / Umhlaba weSondlo
☆ Idama lendlu
Umntu: Uyatyeba, kodwa uphezulu kwi-viscosity. Kufuneka isetyenziswe njengesichumisi esisisiseko, esingafanelekanga ukuba sisetyenziswe sodwa.
Njenge-taxodium distichum, enomxholo ophantsi we-resin, uya kuba ngcono.
Ngokufanelekileyo. Akufanele isetyenziswe ngokuthe ngqo kwaye ingaxutywa nezinye izinto eziphilayo.
Isizathu sokuba Imicimbi yeOrganic kufuneka ichithwe ngokupheleleyo
Ukubola kwezichumiso zendalo kukhokelela kwimiba emibini ephambili yotshintsho kwisichumiso sezinto eziphilayo ngokwenza imisebenzi yentsholongwane: ukubola kwezinto eziphilayo (yonyusa isondlo sesichumiso). Kwelinye icala, umbandela wezinto eziphilayo wesichumiso utshintsha ukusuka kubunzima ukuya kuthambile, ukutshintsha kobume ukusuka kokungalinganiyo ukuya kokufanayo. Kwinkqubo yomgquba, izakubulala imbewu yokhula, iintsholongwane kunye uninzi lwamaqanda wombungu. Ke, ilungelelaniswe ngakumbi neemfuno zemveliso yezolimo.